पा’पिनी आमा २ छोरीलाई स्कुलको गेटमा छोडेर गा’यब, छोरीहरू यस्तो अवस्थामा हिँड्दै ! – Taja Khawar
पा’पिनी आमा २ छोरीलाई स्कुलको गेटमा छोडेर गा’यब, छोरीहरू यस्तो अवस्थामा हिँड्दै !
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, भाद्र १८, २०७८ समय: ०:४१:४४
September 2, 2021 adminसमाचारNo Commenton पा’पिनी आमा २ छोरीलाई स्कुलको गेटमा छोडेर गा’यब, छोरीहरू यस्तो अवस्थामा हिँड्दै !
दाङ तुल्सीपुर निवासी मेघराज कठेरा कि श्रीमती केशरी आफ्ना दुई छोरि छोडी फरार भएकी छिन् श्रीमान बैदेशिक रोजगारीको लागि खाडी मुलुक गएका थिए। श्रीमती र छोरि हरुलाई खुशी राख्नको लागि मेघराज साउदी गएका थिए। छोरिहरु साना भएको र
मैले मेरो श्रीमती माथि धेरै नै विश्वास गरे तर उसले मेरो सोझो पनको फाइदा उठाई ,मेरा छोरि हरुको बिचल्लीका साथै मैले कमाएको पैसाको पनि हिनामिना गराई। छोरिहरुको पढाई पनि बिगारी , बिचार यी छोरीहरु आमाको फोटो छोपी गाउभरी खोज्दै हिड्छन।
Last Updated on: September 3rd, 2021 at 12:41 am